It is me. Ko Niknayman.: ပြည်သူ့ သစ္စာဖောက် တစ်ယောက်။
ဒီဓါတ်ပုံ က စွမ်းအားရှင်တယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံပါ။ သူက ကျောက်တံတားမြို့ နယ်မှာနေပါတယ်။ ဘားလမ်းက အလှပြင်ဆိုင်တွေ နဲ့တခြား လမ်းဘေးဈေးသည်တွေဆီက ဆက်ကြေးကောက်လေ့ရှိပါတယ်။ တနေ့ ကို ကျပ် ၅၀၀၀ လောက်ရတယ်။
သူ့ ခါးမှာ စကားပြောစက်ကို ထိုးထားတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြပြီး၊ ဒီလို နအဖလက်ပါးစေတွေကို လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 11:26 AM